စင်ကာပူနိုင်ငံ - ဝီကီပီးဒီးယား
(စင်္ကာပူ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
စင်ကာပူ (English:Singapore; Chinese: 新加坡; pinyin: Xīnjiāpō; Malay: Singapura; Tamil: சிங்கப்பூர், Cingkappūr) တရားဝင်အမည်အားဖြင့် စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံ သည် ကျွန်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး မလေးကျွန်းဆွယ်၏ တောင်ဘက်အစွန်ဆုံး တွင်တည်ရှိသည်။ အီကွေတာ၏မြောက်ဘက် ၈၅မိုင်(၁၃၇ ကီလိုမီတာ) အကွာတွင် တည်ရှိပြီး မလေးရှားနိုင်ငံ ဂျိုဟိုး(Johor) ပြည်နယ်၏ တောင်ဘက်နှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ရီအောကျွန်းစု(Riau Islands) ၏ မြောက်ဘက်တွင် တည်ရှိသည်။ စတုရန်းမိုင် ၂၇၃မိုင် (စတုရန်းကီလိုမီတာ ၇၀၇.၁ ကီလိုမီတာ)သာ ရှိသဖြင့် စင်ကာပူသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံနှင့်မြို့တော်တစ်ခုတည်းဖြစ်သော နိုင်ငံ ၃ ခုတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ အရှေ့တောင်အာရှတွင် အသေးငယ်ဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်သည်။
အခြားသော တရားဝင်နာမည် ၃ ခု
சிங்கப்பூர் குடியரசு (တမီးလ်)
ဆောင်ပုဒ်: Majulah Singapura (မလေး)
နိုင်ငံတော် သီချင်း: မာဂျူလာ စင်ကာရပူ
ပြည်ထောင်စု ကြီးစိုးပါတီ ပါလီမန် ဖွဲ့စည်းပုံ သမ္မတနိုင်ငံစနစ်
လွတ်လပ်ရေးရရှိခြင်း ယူနိုက်တက် ကင်းဒမ်းနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံမှ
၁၉၅၉ ခုနှစ် ဇွန်လ ၃ ရက်
• မလေးရှားနှင့် သဘောတူညီမှု
၁၉၆၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်
• စင်ကာပူ ကြေညာချက်
၁၉၆၅ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၉ ရက်
• အာဆီယံ ကြေညာချက်
၁၉၆၇ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၈ ရက်
၇၂၈.၆ km2 (၂၈၁.၃ sq mi) (အဆင့်: ၁၇၆)
၅,၄၅၃,၆၀၀[မှတ်စု ၁] (အဆင့် - ၁၁၅)
၇,၈၀၄/km2 (၂၀,၂၁၂.၃/sq mi) (အဆင့် - ၂)
$၆၀၀.၀၆၃ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၃၈)
$၁၀၂,၇၄၂ (အဆင့် - ၂)
$၃၇၄.၃၉၄ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၃၈)
$၆၄,၁၀၃ (အဆင့် - ၈)
စင်ကာပူ ဒေါ်လာ (S$) (SGD)
စင်ကာပူ စံတော်ချိန် (UTC+8)
ဥရောပသားတို့ အခြေချမနေထိုင်မီအချိန်က ယခုသိရှိသော စင်ကာပူသည် စင်ကာပူမြစ်ဝတွင် တည်ရှိသော မလေးငါးဖမ်းရွာကလေးတစ်ရွာမျှသာဖြစ်သည်။ ရာပေါင်းများစွာသော အိုရန်လော့ (Orang Laut) ခေါ် နယ်မြေခံ မလေးလူမျိုးတို့သည် ကမ်းရိုးတန်းအနီး၊ မြစ်ချောင်းများအနီးနှင့် ကျွန်းကလေးများပေါ်တွင် နေထိုင်ကြသည်။ ၁၈၁၉ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှ အရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီမှ ကျွန်းပေါ်တွင် ကုန်သွယ်ရေးစခန်းကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ထိုအချိန်မှစ၍ သစ်မြစ်ဆေးဝါးတို့ သယ်ယူရာကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း၏ ဗျူဟာကျသော ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ စင်ကာပူသည် ဗြိတိသျှအင်ပိုင်ယာ၏ အရေးပါသော ကုန်သွယ်ရေး နှင့် စစ်ရေး ဒေသ တစ်ခုဖြစ်လာပြီး ဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်မှု၏ အချက်အချာနေရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း၌ ဂျပန်တို့က မြို့တော်ကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီး ဝင်စတန်ချာချီက ဗြိတိသျှတို့၏ အကြီးကျယ်ဆုံးရှုံးနိမ့်မှု ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။ စစ်ပြီးခေတ်တွင် စင်ကာပူ သည် ၁၉၄၅ တွင် ဗြိတိသျှတို့၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်သို့ လျင်မြန်စွာ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၁၈နှစ်ကြာပြီးနောက် ဗြိတိသျှလက်အောက်မှ လွတ်လပ်ရေးရပြီးသည့်အခါ မလေးရှားအောက်မှ မလာယာ(Malaya)၊ ဆာဘား (Sabah) ၊ ဆာရာဝပ် (Sarawak) တို့နှင့် ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ သို့သော် ၂ နှစ်မျှ မကြာမီအချိန်၌ပင် စင်ကာပူသည် မလေးရှားလက်အောက်မှ ခွဲထွက်ခဲ့ပြီး ၁၉၆၅ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင် လွတ်လပ်သော သမ္မတနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့သည်။ စင်ကာပူသည် ထိုနှစ်အတွင်းမှာ ပင် စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်တွင် ကုလသမဂ္ဂသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
၂ နိုင်ငံရေးနှင့် အစိုးရ
၇.၁ လွတ်လပ်ရေး မရခင် စီးပွားရေး
၇.၂ ယနေ့ခေတ် စီးပွားရေး
၇.၃ စီးပွားရေး ကဏ္ဍများ
၁၀ အခြေခံ အဆောက်အအုံ
၁၀.၁ ဆက်သွယ်ရေး နှင့် ကွန်ယက်
၁၀.၃ ရေပေးဝေမှု နှင့် မိလ္လာစနစ်
၁၁ လူဦးရေပျံ့နှံ့ နေထိုင်မှု
၁၂.၁ ဘာသာစကား၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု နှင့် ယဉ်ကျေးမှု
၁၂.၂ အပြုအမူနှင့် ယုံကြည်မှု
၁၂.၅ အားကစား နှင့် အပန်းဖြေမှု
စင်ကာပူနိုင်ငံနှင့် ပတ်သတ်သော ပထမဦးဆုံး အခြေချနေထိုင်မှု သမိုင်းကြောင်းမှာ အေဒီ ၂ရာစုတွင်ဖြစ်သည်။ စင်ကာပူကျွန်းသည် စူမာတယန် ဆရီဝိဂျာယ (Sumatran Srivijaya) အင်ပါယာ၏ အစွန်အဖျားဖြစ်ပြီး မူလပထမအားဖြင့် ဂျာဗားကျွန်းသား စကားဖြင့် တီမားဆက် (Temasek) (ပင်လယ်မြို့) ဟုခေါ်သည်။ တီမားဆက်သည် လျင်မြန်စွာပင် ကုန်သွယ်မှုအတွက် အခြေချနေထိုင်ရာ ဖြစ်လာခဲ့သော်လည်း ၁၄ရာစုအတွင်းတွင် ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးလာခဲ့သည်။ ရှေးဟောင်း တီမားဆက်ခေတ်မှ အကြွင်းအကျန်မှာ အနည်းငယ်သာရှိသော်လည်း စင်ကာပူမှ ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်တို့က တီမားဆက် နှင့် အခြားခေတ်မှ လက်မှုပစ္စည်းအချို့ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ၁၆ ရာစုနှင့် ၁၉ ရာစုအစောပိုင်းတွင် စင်ကာပူကျွန်းသည် ဂျဟိုးစူလတန်၏နယ်မြေ (Sultanate of Johor) အတွင်းတွင် ပါဝင်သည်။ ၁၆၁၃ ခုနှစ် မလေး-ပေါ်တူဂီစစ်ပွဲအတွင်းတွင် အခြေချနေထိုင်ရာနေရာအားလုံးကို ပေါ်တူဂီတပ်များက မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ ထိုရာစုနှစ်အတွင်းတွင် စင်ကာပူကျွန်းကို ပေါ်တူဂီတို့က ဆက်လက် ထိန်းချုပ်ခဲ့ကြပြီး ၁၇ ရာစုတွင် ဒတ်ချ်တို့က ထိန်းချုပ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအချိန်များတွင် ကျွန်းပေါ်တွင် နေထိုင်သူများသည် အဓိကအားဖြင့် ငါးဖမ်းသမားများသာ ဖြစ်သည်။
ဆာ စတန်းဖို့ဒ် ရပ်ဖဲလ် ၁၈၁၉ ခုနှစ်တွင် စင်ကာပူကို ပထမဦးဆုံး ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့် အနောက်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ကုန်သွယ်ရေးမြို့၏ ပထမဦးဆုံး ဘုရင်ခံဖြစ်လာခဲ့သည်။ ယနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ၎င်း ပထမဦးဆုံး ခြေချခဲ့သည့် နေရာတွင့် သူ့ရုပ်တုကိုထားရှိသည်။ ၎င်းရုပ်တု၏နောက်တွင် စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ အောင်မြင်မှုနှင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု၏ လက္ခဏာရပ်ဖြစ်သည့် မိုးမျှော်တိုက် အဆောက်အဦးများ ရှိသည်။
၁၈၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်တွင် ဆာသောမတ်စ် စတန်းဖို့ဒ် ရပ်ဖဲလ်သည် စင်ကာပူကျွန်းမကြီးဆီသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ စင်ကာပူကျွန်းသည် ပထဝီအနေအထားအားဖြင့် အရှေ့တောင်အာရှတွင် မဟာဗျူဟာကျသော ကုန်သွယ်ရေးအခြေစိုက်စခန်း ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း ရပ်ဖဲလ်က သတိထားမိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ရပ်ဖဲလ်သည် အရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီ (East India Company) ကိုကိုယ်စားပြု၍ စင်ကာပူကျွန်း၏တောင်ဘက်ပိုင်းကို ဗြိတိသျှတို့၏ ကုန်သွယ်ရေးအခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်ထူထောင်ရန် စူလတန်ဟူစိန်ရှား (Sultan Hussein Shah) နှင့် ၁၈၁၉ ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့တွင် သဘောတူညီချက်စာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။
ကိုလိုနီခေတ် စင်ကာပူ၏ အစပထမမြို့တည်ဆောက်ပုံမှာ အများအားဖြင့် ခွဲခြားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ် အတိုင်းဖြစ်ပြီး ကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးစုတို့သည် ကျွန်း၏တောင်ဘက်ရှိ ကွဲပြားခြားနားသောနေရာတို့တွင် နေထိုင်ကြသည်။ စင်ကာပူမြစ်သည် ကုန်သည်များ နှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တို့၏ ကုန်သွယ်ရေး အချက်အချာနေရာဖြစ်ပြီး တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယကူလီ တို့ bumboats ဟု ခေါ်ကြသော တုံကင်းများမှ ကုန်ပစ္စည်းများကို ထမ်းချရာ နှင့် ထမ်းတင်ရာ နေရာဖြစ်သည်။ ဒေသခံ အိုရန်လော့တ် (Orang Lauts) မလေးလူမျိုးများမှာ ငါးဖမ်းသမားများ နှင့် ပင်လယ်ပြင် ခရီးသွားများအဖြစ် အသက်မွေးကြသည်။ အာရပ်ကုန်သည်များနှင့် ပညာတတ်လူတန်းစားများကိုမူ ယနေ့ ကန်ပေါင်း ဂလန် (Kampong Glam) တည်ရှိရာ မြစ်ဝ၏ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် တွေ့ရသည်။ အနည်းငယ်မျှသော ဥရောပ အခြေချနေထိုင်သူများမှာမူ ဖို့ဒ်ကိန်းနင်းဟေး (Fort Canning Hill) နှင့် စင်ကာပူမြစ်၏ အပေါ်ပိုင်းဒေသများတွင် နေထိုင်ကြသည်။ ဥရောပတိုင်းရင်းသားများကဲ့သို့ပင် အစောပိုင်း အိန္ဒိယမှ ပြောင်းရွေ့လာသူတို့သည်လည်း ကုန်းတွင်းပိုင်းဒေသများတွင် အခြေချနေထိုင်ကြပြီး ယနေ့ လစ်တဲလ်အင်ဒီးယား (Little India) တည်ရှိရာနေရာဖြစ်သည်။ ကမ်ပေါင်း (kampongs) ဟုခေါ်သော ကျေးလက်ဒေသ အခြေချနေထိုင်သူများနှင့် ပတ်သက်၍မူ အသိနည်းပြီး လွတ်လပ်ရေးရပြီး ၁၉၆၀ခုနှစ်များ နှောင်းပိုင်း စင်ကာပူအစိုးရမှ ထိုသို့နေထိုင်သူများကို အများအပြား ရွေ့ပြောင်းနေရာချသည့် အချိန်မှသာ သိရှိရသည်။
ဂျပန်တို့ အင်အားကြီးထွားမလာမီနှစ်များတွင် ဗြိတိသျှတို့သည် ဂျပန်တို့၏စစ်တပ်များ လျင်မြန်စွာ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လာသည် ကို သတိပြုမိသည်။ အရှေ့တောင်အာရှရှိ သူတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ဗြိတိသျှတို့သည် စင်ကာပူ၏ မြောက်ဘက်ဆုံးအပိုင်းတွင် ရေတပ်အခြေစိုက်စခန်းကို တည်ဆောက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ဥရောပရှိ ဂျာမန်စစ်ပွဲကြောင့် စစ်သင်္ဘောများနှင့် စစ်လက်နက်များကို ဥရောပသို့ ယူဆောင်သွားခဲ့ရသည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းတွင် ဂျပန်ဘုရင့်တပ်မတော် (the Imperial Japanese Army) သည် မလာယာ ကို ကျူးကျော်ခဲ့ပြီး စင်ကာပူတိုက်ပွဲကို ပြင်းထန်စွာဖြစ်စေခဲ့သည်။ ပြင်ဆင်မှုအားနည်း၍ တပ်အမြောက်အမြားမှာ ဥရောပတွင် ရောက်နေသော ဗြိတိသျှတို့မှာ ၆ ရက်အတွင်းတွင် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး မသိမ်းပိုက်နိုင်သည့် ခံတပ်ဟုဆိုသော နေရာကို ၁၉၄၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တိုမိုယူကီ ယာမာရှီတာ (General Tomoyuki Yamashita) သို့ လက်နက်ချခဲ့ရသည်။ ထိုလက်နက်ချမှုနှင့် ပတ်သက်၍ "ဗြိတိသျှသမိုင်းတွင် အဆိုးရွားဆုံး ကပ်ဆိုက်မှု နှင့် အကြီးကျယ်ဆုံးသော လက်နက်ချမှု" ဟူ၍ ဗြိတိသျှဝန်ကြီးချုပ် ဝင်စတန်ချာချီက ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှ ရေတပ်အခြေစိုက်စခန်းကို ဂျပန်တို့ သိမ်းပိုက်၍ အသုံးမပြု နိုင်ခင်အချိန်က ပင် ဖျက်စီးခဲ့သည်။ ဂျပန်တို့ က စင်ကာပူကို ရှိုးနန်တိုး (昭南島, Shōnantō?) ဟုအမည်ပေးခဲ့ပြီး "Shōwa no jidai ni eta minami no shima" ("昭和の時代に得た南の島", "Shōwa no jidai ni eta minami no shima"?) သို့ ရှိုဝါခေတ်တွင် ရရှိခဲ့သော တောင်ဘက်ကျွန်းဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ဂျပန်တို့သည် လက်နက်ချပြီး တစ်လအကြာ ၁၉၄၅ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်အထိကျွန်းကို သိမ်းယူထားခဲ့ပြီး ထို့နောက်တွင် ဗြိတိသျှတို့က ပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။
ရှိုးနားတိုးကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့် စယိုနန်(Syonan-to) တို သို့ စယိုနန် (Syonan) ဟု ရေးကြပြီး အဓိပ္ပာယ်မှာ တောင်ဘက်၏ အလင်းရောင်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
စင်ကာပူသည် ၁၉၅၉ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှအင်ပါယာအတွင်း၌ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ် ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ယူစွတ်ဘင် အီရှက် (Yusof bin Ishak) သည် ပထမဆုံး Yang di-Pertuan Negara (ပြည်နယ်တစ်ခုလုံး၏ ထင်ရှားသောအုပ်ချုပ်သူ) ဖြစ်လာခဲ့ပြီး လီကွမ်းယု မှာ ပထမဆုံး ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သည်။ ဗြိတိန်၏ အောက်မှ ၁၉၆၃ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် လွတ်လပ်ရေး ကြေညာခဲ့သည်။ ၁၉၆၂ စက်တင်ဘာတွင် ခွဲရေးတွဲရေး ဆန္ဒခံယူပွဲ၏ ရလဒ်ကြောင့် မလာယာ၊ ဆာဘား နှင့် ဆာရာဝက်တို့ နှင့်အတူ မလေးရှား ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနှင့် ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ သို့သော် ၂ နှစ်အကြာတွင် ပြည်နယ်၏ ပီအေပီ အစိုးရနှင့် ဖက်ဒရယ် ကွာလာလမ်ပူ အစိုးရတို့ အယူအဆပိုင်းဆိုင်ရာ အကြီးအကျယ်အငြင်းပွားမှု တို့ကြောင့် စင်ကာပူသည် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမှ ခွဲထွက်ခဲ့သည်။ စင်ကာပူသည် ၁၉၆၅ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၉ ရက်တွင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် တရားဝင်ရပ်တည်ခဲ့သည်။ ယူစွတ်ဘင်အီရှက်သည် စင်ကာပူ၏ ပထမဆုံးသမ္မတအဖြစ် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုခဲ့ပြီး လီကွမ်းယုမှာ ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ဆက်လက်ရှိနေခဲ့သည်။
စင်ကာပူတွင် သန်စွမ်းသော ယောက်ျားလေးတိုင်း ၁၈ နှစ်တွင် စစ်မှု မထမ်း မနေရ အမိန့် စတင်သည်။ ရာဇဝတ်မှတ်တမ်း ရှိသူများနှင့် ၎င်းတို့ မရှိသည့် အချိန်တွင် မိသားစု အတွက် အခက်အခဲများ ခံစားရနိုင်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်သူများသာ လွတ်ကင်းသည်။ တက္ကသိုလ် အကြို ပညာရေးကို မပြီးဆုံးသေးသူများ နှင့် အများပြည်သူ ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု ကော်မရှင်မှ စကော်လာရှစ် ရရှိထားသူများ အနေနှင့် စစ်မှု မထမ်းမနေရ အချိန်ကို ရွှေ့ဆိုင်းနိုင်သည်။ စစ်မှုမထမ်း မနေရ မဟုတ်သော်လည်း စင်ကာပူ စစ်တပ် အတွင်း မိန်းကလေး ဦးရေမှာ များပြားလာလျက် ရှိသည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ် အမျိုးသားများ အတွက် သီးသန့် သတ်မှတ်ထားသော ရာထူးနေရာ များကို အမျိုးသမီးများအား စတင်ခန့်အပ်သည့် အချိန်မှစ၍ ဖြစ်သည်။ အထူးပြုတပ်တစ်ခု စီသို့ မရောက်မီတွင် တပ်သားသစ်များသည် အခြေခံ စစ်သင်တန်းကို ၉ ပတ်မျှ သင်ကြားရသည်။
ပင်မ ကျွန်းမကြီးပေါ်တွင် မြေနေရာလွတ် ရှားပါးသောကြောင့် ကျည်ဆန် အစစ်ဖြင့် သေနတ်ပစ်ခြင်း နှင့် ကမ်းတက် တိုက်ပွဲ လေ့ကျင့်ခြင်း အစရှိသော လေ့ကျင့်မှုများကို အရပ်သားများ ဝင်ရောက်ရန် တားမြစ်ထားသော ကျွန်းငယ်ကလေးများပေါ်တွင် ပြုလုပ်လေ့ ရှိသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ကျွန်းမကြီး နှင့် မြို့အား အန္တရာယ် ကျရောက်မှုမှ ရှောင်ရှားနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း ကြီးမားသော လေ့ကျင့်မှုများ အတွက် ထိုနေရာများတွင် ပြုလုပ်ရန် အန္တရာယ် ရှိသဖြင့် ၁၉၇၅ မှစ၍ ထိုသို့သော လေ့ကျင့်မှုများကို ထိုင်ဝမ်တွင် ပြုလုပ်လေ့ ရှိသည်။ လေ့ကျင့်မှုများကို အခြားသော နိုင်ငံ တစ်ဒါဇင်ခန့်တွင်လည်း ပြုလုပ်ကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် နိုင်ငံခြား စစ်တပ်များနှင့် တွဲဖက် လေ့ကျင့်မှုကို တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ် နှစ်ကြိမ်မျှ ပြုလုပ်လေ့ ရှိသည်။
ပင်လယ်ပြင် အတွင်း မြေဖို့၍ မြေနေရာ အသစ်များ ချဲ့ထွင်ခြင်းကြောင့် စင်ကာပူ၏ ကုန်းမြေ ဧရိယာမှာ ၁၉၆၀ ခုနှစ်များတွင် ၂၂၄.၅ စတုရန်းမိုင် (၅၈၁.၅ စတုရန်း ကီလိုမီတာ) သာ ရှိသော်လည်း ယခုအခါတွင် ၂၇၇.၆ စတုရန်းမိုင် (၇၁၉.၁ စတုရန်း ကီလိုမီတာ) အထိ ရှိလာသည်။ စင်ကာပူ နိုင်ငံ အနေနှင့် ၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် နောက်ထပ် ၄၀ စတုရန်းမိုင် (၁၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ) မျှ ထပ်မံ တိုးချဲ့ရန် စီမံကိန်း ချမှတ် လုပ်ဆောင်လျက် ရှိသည်။ အချို့သော စီမံကိန်းများမှာ သေးငယ်သော ကျွန်းများကို မြေဖို့၍ ပေါင်းစပ်ပြီး ကြီးမား၍ အလုပ်လုပ်ရန် အဆင်ပြေသော ကျွန်းများ အဖြစ် တည်ဆောက်ရန် ဖြစ်ကာ ဂျူရောင်း ကျွန်းကို ထိုကဲ့သို့ တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
လွတ်လပ်ရေး မရခင် စီးပွားရေးပြင်ဆင်
ယနေ့ခေတ် စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် အလွန်တိုးတက်သော ဈေးကွက်စီးပွားရေး စနစ် ရှိပြီး သမိုင်းကြောင်းအရ ကုန်သွယ်ရေး အချက်အချာ ဌာန တစ်ခု အဖြစ်မှ ချဲ့ထွင်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဟောင်ကောင်၊ တောင်ကိုရီးယား ၊ ထိုင်ဝမ် တို့နှင့် အတူ စင်ကာပူသည် အာရှ ကျားလေးကောင်တွင် ကနဦး ကတည်းက ပါဝင်ခဲ့ပြီး လူတစ်ဦးချင်း အလိုက် ဂျီဒီပီ အရ အခြား ကျားသုံးကောင်ကို ကျော်တက် သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ စင်ကာပူသည် စီးပွားရေး စနစ်အားဖြင့် အလွတ်လပ်ဆုံး တီထွင်ကြံဆမှု အကောင်းဆုံး ပြိုင်ဆိုင်မှု အများဆုံး  နှင့် စီးပွားရေး လုပ်ရန် အကောင်းဆုံး  သော နေရာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် စီးပွားရေး လွတ်လပ်မှု ညွှန်းကိန်းမှ စင်ကာပူကို ကမ္ဘာတွင် ဒုတိယမြောက် လွတ်လပ်မှု အရှိဆုံး စီးပွားရေး ရှိသော နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ ခြစားမှု ရှုမြင် ကိန်းညွှန်းတွင် စင်ကာပူသည် ကမ္ဘာတွင် ခြစားမှု အနည်းဆုံးသောနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ အဖြစ် နယူးဇီလန် နှင့် စကင်ဒီနေးဗီးယား နိုင်ငံများနှင့် အတူ အမြဲတစေ ပါဝင်လေ့ ရှိသည်။
စင်ကာပူသည် ယခင် ဆယ်စုနှစ် အတွင်း စတန်းဒတ် အင်န် ပူးဝါး၊ မူဒီ နှင့် ဖစ်ချ် တို့ အပါအဝင် အားလုံးသော ချေးငွေ အဆင့်သတ်မှတ်သည့် အေဂျင်စီ များမှ နိုင်ငံ အလိုက် ချေးငွေအဆင့် အနေနှင့် ထိပ်ဆုံး ဖြစ်သော အေသုံးလုံး အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း ခံရသည့် တစ်ခုတည်းသော အာရှနိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ တကမ္ဘာလုံး အနေနှင့် ဆိုလျှင် အကြီးဆုံး ချေးငွေ အဆင့်သတ်မှတ်သည့် အေဂျင်စီ သုံးခုမှ အေသုံးလုံး အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း ခံရသော နိုင်ငံ ကိုးနိုင်ငံ တွင် တစ်နိုင်ငံ အဖြစ်ပါဝင်သည်။ စင်ကာပူသည် တည်နေရာ အရ လည်းကောင်း၊ ခြစားမှု ကင်းစင်ခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း၊ ကျွမ်းကျင် အလုပ်သမားများ ပေါများမှုကြောင့်လည်းကောင်း၊ အခွန်အခ နှုန်းထား သက်သာခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ ခေတ်ရှေ့ပြေးသော အခြေခံ အဆောက်အအုံ များကြောင့် လည်းကောင်း များပြားလှစွာသော နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ စင်ကာပူတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဂျပန်နိုင်ငံ နှင့် ဥရောပတို့မှ နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီပေါင် ၇,၀၀၀ ကျော် ရုံးစိုက်ကြသည်။ ထို့ပြင် တရုတ်နိုင်ငံ မှ ကုမ္ပဏီ ၁,၅၀၀ ခန့် နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှလည်း ၁,၅၀၀ ခန့် ရှိသော ကုမ္ပဏီများ ရုံးစိုက်ကြသည်။ နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီများကို နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး ကဏ္ဍ အသီးသီးတွင် တွေ့မြင်နိုင်သည်။ စင်ကာပူသည် အိန္ဒိယတွင် ဒုတိယမြောက် အကြီးမားဆုံးသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုသည့် နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံလည်း ဖြစ်သည်။ စင်ကာပူရှိ အလုပ်သမားများ၏ ၄၄ ရာခိုင်နှုန်းမှာ စင်ကာပူနိုင်ငံသားများ မဟုတ်ကြပေ။ ဆယ်ခုကျော်သော နိုင်ငံ နှင့် ဒေသများ နှင့် လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်မှု သဘောတူညီချက်များကိုလည်း လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည်။  ဈေးကွက် အရ လွတ်လပ်မှု ရှိသော်လည်း စင်ကာပူ အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းများသည် စီးပွားရေး ကဏ္ဍအတွင်း သိသိသာသာ နေရာယူထားပြီး နိုင်ငံ ဂျီဒီပီ၏ ၂၂% ကို ပံ့ပိုးပေးလျက် ရှိသည်။ 
စင်ကာပူ၏ စီးပွားရေးသည် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ နှင့် ရေနံချက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် များစွာ မှီခိုရပ်တည်လျက် ရှိသည်။ စင်ကာပူ၏ ထိပ်ဆုံး ပြည်ပပို့ကုန်များမှာ သန့်စင်ပြီးသော ရေနံ၊ အိုင်စီ ဆားကစ် နှင့် ကွန်ပျူတာ တို့ ဖြစ်ကြပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ် နိုင်ငံ ဂျီဒီပီ၏ ၂၇% မျှ ရှိကာ အီလက်ထရွန်းနစ် လုပ်ငန်းများ၊ ရေနံချက်လုပ်ငန်းများ၊ ဓာတုလုပ်ငန်းများ၊ စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ နှင့် ဇီဝဆေးပညာ သိပ္ပံ ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများ သိသာထင်ရှားစွာ ပါဝင်သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် စင်ကာပူသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အီလက်ထရွန်းနစ် ဝေဖာချစ်ပ်များ ထုတ်လုပ်ရာ ဖောင်ဒရီများ၏ ဝေဖာ ချစ်ပ် ထုတ်လုပ်မှုမှ ၁၀% ခန့်ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ 
စင်ကာပူသည် ပညာရေး အချက်အချာ ဌာန တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားပေါင်း ၈၀,၀၀၀ ကျော် လာရောက် ပညာသင်ကြား ကြသည်။  မလေးရှားမှ ကျောင်းသားပေါင်း ၅,၀၀၀ ကျော်တို့သည် ဂျဟိုး-စင်ကာပူ ကော့စ်ဝေး တံတားကို ဖြတ်သန်း၍ မလေးရှားမှ စင်ကာပူသို့ နေ့စဉ် ကျောင်းတက် ကြသည်။  ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် စင်ကာပူရှိ တက္ကသိုလ်များ၏ ကျောင်းသား ၂၀% မှာ နိုင်ငံတကာမှ ကျောင်းသား များ ဖြစ်ကြပြီး အများစုမှာ အာဆီယံနိုင်ငံများ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ တို့မှ ဖြစ်သည်။
ဆက်သွယ်ရေး နှင့် ကွန်ယက်ပြင်ဆင်
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သူများသည် ခြေလျင်၊ စက်ဘီး၊ ဘတ်စ်ကား၊ အငှားယာဉ်၊ အမ်အာရ်တီ ခေါ် လျှပ်စစ်အမြန်ရထား အကြီးစား၊ အယ်လ်အာရ်တီ ခေါ် လျှပ်စစ် အမြန်ရထား အငယ်စား တို့ဖြင့်လည်း သွားလာကြသည်။ အက်စ်ဘီအက်စ် ထရန်စစ် နှင့် အက်စ်အမ်အာရ်တီ ကော်ပိုရေးရှင်း ဆိုသော ကုမ္ပဏီ နှစ်ခုမှ အများပြည်သူသုံး ဘတ်စ်ကားနှင့် ရထားတို့ကို ပြေးဆွဲကြသည်။ အငှားယာဉ် ကုမ္ပဏီ ၆ ခု ရှိပြီး ထိုကုမ္ပဏီများမှ အငှားယာဉ် ၂၈,၀၀၀ ကျော်ကို လမ်းများပေါ်တွင် ပြေးဆွဲလျက် ရှိသည်။ အငှားယာဉ်မှာ လူသုံးများသော အများသုံး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း တစ်ခု ဖြစ်ပြီး အခြားသော ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အငှားယာဉ် နှုန်းထားမှာ သက်သာသည်ကို တွေ့ရသည်။
စင်ကာပူသည် အာရှရှိ နိုင်ငံတကာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အချက်အချာ ဌာနတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ပင်လယ် နှင့် လေကြောင်း ကုန်သွယ်မှု လမ်းကြောင်းများ ပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ ပီအက်စ်အေ အင်တာနေရှင်နယ် နှင့် ဂျူရောင်းဆိပ်ကမ်းတို့ မှ စီမံခန့်ခွဲသော စင်ကာပူ ဆိပ်ကမ်း မှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဒုတိယမြောက် အလုပ်အများဆုံး ဆိပ်ကမ်း တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း တန်ချိန် ၁.၁၅ ဘီလီယံ နှင့် ပေနှစ်ဆယ် ကုန်သေတ္တာပေါင်း ၂၃.၂ သန်းကို အတင်အချ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အလုပ်အများဆုံး တဆင့်ခံ ကုန်ပို့ရာ ဆိပ်ကမ်းဖြစ်ပြီး သင်္ဘောများ ဆီဖြည့်ရာ အကြီးဆုံး ဆိပ်ကမ်းလည်း ဖြစ်သည်။ 
စင်ကာပူသည် အရှေ့တောင်အာရှ၏ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး အချက်အချာ ဌာနတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဆစ်ဒနီမြို့ နှင့် လန်ဒန်မြို့ကြား ပျံသန်းသော သားပိုက်ကောင် လမ်းကြောင်း၏ တထောက်နားရာ နေရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် လေဆိပ် ၈ ခု ရှိပြီး စင်ကာပူ ချန်ဂီလေဆိပ် သည် လေကြောင်းလိုင်းပေါင်း ၁၀၀ ကျော်၏ ဆိုက်ရောက်ရာ နေရာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ နိုင်ငံနှင့် ဒေသပေါင်း ၇၀ ကျော်မှာ မြို့ကြီး ၃၀၀ ခန့်ကို ချိတ်ဆက်ပေးထားသည်။ နိုင်ငံတကာ ခရီးသွားလာရေး မဂ္ဂဇင်းများမှ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး လေဆိပ်တစ်ခု အဖြစ် မကြာခဏ သတ်မှတ်လေ့ ရှိကြပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် စကိုင်း ထရက်စ်မှ ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး လေဆိပ် အဖြစ် သတ်မှတ် ဖော်ပြခဲ့သည်။
ရေပေးဝေမှု နှင့် မိလ္လာစနစ်ပြင်ဆင်
စင်ကာပူ နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် အမြဲတမ်း နေထိုင်သူ မိသားစုများမှ ဦးဆောင်သော ၉၀.၃ ရာခိုင်နှုန်းသော မိသားစုများသည် ၎င်းတို့နေထိုင်ရာ အိမ်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး မိသားစု၏ အရွယ်အစားမှာ နိုင်ငံသား နှင့် အမြဲတမ်း နေထိုင်သူများ မဟုတ်သည့် မှီခိုသူများ အပါအဝင် ၃.၄၃ ဦး ဖြစ်သည်။ သို့သော် မြေနေရာ ရှားပါးမှုကြောင့် ၈၀.၄% သော မိသားစုများမှာ အိတ်ချ်ဒီဘီ ခေါ် အစိုးရမှ ဈေးလျှော့ရောင်းသော အထပ်မြင့် အများပြည်သူပိုင် အဆောက်အဦးများတွင် နေထိုင်ကြသည်။ ထို့အတူ ၇၅.၉% သော မိသားစုများမှာ ၄ ခန်း (အိပ်ခန်း ၃ခန်းနှင့် ဧည့်ခန်း ၁ခန်း) နှင့် ၄ ခန်းအထက် ရှိသော အိတ်ချ်ဒီဘီ တိုက်ခန်းများ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိက အိမ်ရာများတွင် နေထိုင်ကြသည်။ မိသားစုများ နှင့် အတူနေသော နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဖော်များမှာ စင်ကာပူတွင် နေရာအနှံ့တွေ့ရပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် စုစုပေါင်း နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဖော် ၂၂၄,၅၀၀ ဦးမျှ ရှိသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာသည် စင်ကာပူတွင် ကိုးကွယ်သူ အများဆုံး ဘာသာတစ်ခုဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး လူဦးရေ စာရင်းအရ နေထိုင်သူ၏ ၃၃% သည် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သူများ အဖြစ် ကြေညာကြသည်။ ဒုတိယမြောက် ကိုးကွယ်သူ အများဆုံး ဘာသာမှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာ ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ နောက်တွင် အစ္စလာမ်ဘာသာ ၊ တာအိုဘာသာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာ တို့က အစဉ်လိုက် ရှိသည်။ လူဦးရေ၏ ၁၇% မှာ မည်သည့်ဘာသာကိုမျှ မကိုးကွယ်ပေ။ ၂၀၀၀ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ကြားတွင် ခရစ်ယာန်၊ တာအိုဘာသာ နှင့် ဘာသာမဲ့ ဦးရေမှာ ၃% စီ တိုးတက်လာခဲ့သဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သူ ရာနှုန်းမှာ လျော့နည်း သွားခဲ့သည်။ အခြားသော ကိုးကွယ် ယုံကြည်မှုများ၏ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ယခင် အတိုင်း ဆက်လက် တည်ရှိနေခဲ့သည်။ ပြူး သုတေသန ဌာန၏ လေ့လာ ဆန်းစစ် ချက် အရ စင်ကာပူနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဘာသာတရား အမျိုးမျိုး ကွဲပြားခြားနားရာ အများဆုံး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ အဖြစ် တွေ့ရသည်။
စင်ကာပူ နိုင်ငံသား ၁၀၀,၀၀၀ သို့မဟုတ် ၃% ကသာ ကလယ်ဘာသာ စကားကို မိခင်ဘာသာ အဖြစ် ပြောဆိုကြသည်။ ကလယ်ဘာသာ စကားမှာ စင်ကာပူတွင် တရားဝင် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ခံရသော်လည်း အခြား အိန္ဒိယ ဘာသာစကားများကို အားမပေးခြင်း မျိုး မရှိပေ။
နိုင်ငံခြား အလုပ်သမားများမှာ နိုင်ငံစီးပွားရေး အတွက် အရေးပါသော နေရာမှ ပါဝင်သည်ကို သိရှိသော်လည်း အစိုးရမှ ထိုအလုပ်သမားများကို ကန့်သတ်ရန် စီစဉ်လျက် ရှိသည်။  နိုင်ငံခြား အလုပ်သမားများသည် ဆောက်လုပ်ရေး ကဏ္ဍ၏ ၈၀% နှင့် ဝန်ဆောင်မှု ကဏ္ဍ၏ ၅၀% မျှ ရှိသည်။ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ကဏ္ဍတွင် ကန့်သတ်ရန် နှင့် တဆက်တည်းတွင် နိုင်ငံခြားသား ပါရမီရှင်များကို ဆွဲဆောင် နိုင်ရန် အတွက် အလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာနမှ အလုပ်လုပ်ခွင့် လက်မှတ်များကို အဆင့် ၃ ဆင့်ဖြင့် ချထားပေးသည်။ P1 အဆင့် အလုပ်လုပ်ခွင့် လက်မှတ်မှာ လစာ စင်ကာပူ ဒေါ်လာ ၈၀၀၀ နှင့် အထက် ရရှိသူများ အတွက် ဖြစ်ပြီး P2 အဆင့် အလုပ်လုပ်ခွင့် လက်မှတ်များမှာ လစာ စင်ကာပူ ဒေါ်လာ ၄၅၀၀ မှ ၇၉၉၉ ဒေါ်လာ အတွင်း ရရှိသူများ အတွက် ဖြစ်ကာ Q1 အလုပ်လုပ်ခွင့် လက်မှတ် မှာမူ လစာ အနည်းဆုံး စင်ကာပူ ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ရရှိသူများ အတွက် ဖြစ်သည်။ 
ဘာသာစကား၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု နှင့် ယဉ်ကျေးမှုပြင်ဆင်
အားကစား နှင့် အပန်းဖြေမှုပြင်ဆင်
ခရန်းဂျီး မြင်းပြိုင်ကွင်းကို စင်ကာပူမြင်းပြိုင်ပွဲကလပ်မှ လုပ်ကိုင်နေပြီး အပတ်စဉ် မြင်းပြိုင်ပွဲ အများအပြား နှင့် အရေးကြီးသော ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ မြင်းပြိုင်ပွဲများကိုလည်း လက်ခံကျင်းပ ပေးလျက် ရှိသည်။ ထင်ရှားသော ပြိုင်ပွဲမှာ နာမည်ကျော်ကြားသော စင်ကာပူ လေကြောင်းလိုင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖလား မြင်းပြိုင်ပွဲ ဖြစ်သည်။
↑ Population and Population Structure။ Department of Statistics Singapore။
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ ၃.၃ World Economic Outlook Database, October 2019။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့။
↑ DISTRIBUTION OF FAMILY INCOME – GINI INDEX။ Central Intelligence Agency။
↑ Singapore။ bartleby.com။ 2006-04-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။[လင့်ခ်သေ]
↑ Early History။ Ministry of Information, Communications and the Arts, Singapore။ 27 April 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2006-04-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Studying In Singapore။ Search Singapore Pte Ltd။ 21 May 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2006-04-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sang Nila Utama (PDF)။ 24hr Art။ 19 August 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2006-04-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ World Factbook – Singapore။ U.S. Central Intelligence Agency။ 12 June 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ Corruption Perceptions Index 2009။ Transparency International (2009)။ 1 June 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The President။ Singapore Government။ 11 June 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 June 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Members of Parliament။ Government of Singapore။ 17 April 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 June 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၄.၀ ၁၄.၁ Freedom in the World 2010 – Singapore။ Freedom House။7January 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 June 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Democracy index 2010။ The Economist (2010)။ 19 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Singapore။ Freedom House (2013)။3May 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 28 May 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "GE: Singapore's PAP returns to power"၊ Channel NewsAsia၊ 8 May 2011။9February 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on5January 2012။
↑ "Lee Kuan Yew's Lasting Legacy: A Good Life in Singapore"၊ Gallup၊ March 25, 2015။
↑ Judicial caning in Singapore, Malaysia and Brunei။ World Corporal Punishment Research (2008)။2July 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kuntz, Tom။ "Ideas & Trends; Beyond Singapore: Corporal Punishment, A to Z"၊ 26 June 1994။
↑ Singapore country specific information။ U.S. Department of State (19 March 2010)။ 30 December 2004 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။9February 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "The Singapore Government's Response To Amnesty International's Report "Singapore – The Death Penalty: A Hidden Toll Of Executions"" (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။ Ministry of Home Affairs။ 30 January 2004။ 25 January 2010 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Hong Kong has best judicial system in Asia: business survey"၊ ABS-CBN News၊ 15 September 2008။ 23 August 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Singapore။ World Justice Project (No date)။ 1 January 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Singapore to toughen protest laws ahead of APEC meet"၊ 17 January 2009။ 31 July 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on4November 2015။
↑ ၂၆.၀ ၂၆.၁ ၂၆.၂ ၂၆.၃ ၂၆.၄ Australia – New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)။ New Zealand Government (4 December 2008)။ 11 May 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Singapore Missions Overseas။ Ministry of Foreign Affairs။ 15 March 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 January 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Overview။ ASEAN (2009)။ 26 January 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NAM Member States။ The Non-Aligned Movement (23 January 2002)။9December 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Member States။ Commonwealth Secretariat။ 18 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃၁.၀ ၃၁.၁ Gifford၊ Rob။ "Malaysia and Singapore: A rocky relationship"၊ BBC News၊ 18 September 1998။
↑ ၃၂.၀ ၃၂.၁ World Factbook – Field Listing: International disputes။ Central Intelligence Agency (USA)။ 18 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lloyd Parry၊ Richard။ "Singapore accused of land grab as islands disappear by boatload"၊ The Times၊ 17 March 2007။ (အသင်းဝင်ရန် လိုအပ်သည်။)
↑ Brunei Foreign and Trade Relations: ASEAN။ New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade (14 January 2009)။ 18 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Zhang Xuegang။ "Opening "window of opportunity" for China-Singapore cooperation"၊ 20 November 2007။ 31 July 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ __AES2010.pdf Total trade by selected country at current prices။ Ministry of Trade and Industry (Singapore) (2010)။ 31 July 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Matthew၊ David။ "Singapore Eyes U.S. Balance"၊ The Diplomat၊ 14 February 2012။ 31 July 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Factsheet – The Strategic Framework Agreement။ MINDEF (14 May 2012)။ 31 July 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Moss၊ Trefor။ "Buying an advantage"၊ Jane's Defence Review၊ 18 January 2010။
↑ "SAF remains final guarantor of Singapore's independence"၊ Channel NewsAsia၊ 1 July 2007။ 19 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄၁.၀ ၄၁.၁ "Speech by Minister for Manpower and Second Minister for Defence Dr Ng Eng Hen" (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။ Ministry of Defence။ 18 February 2008။ 19 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄၂.၀ ၄၂.၁ ၄၂.၂ ၄၂.၃ "Lunch Talk on "Defending Singapore: Strategies foraSmall State" by Minister for Defence Teo Chee Hean" (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။ Ministry of Defence။ 21 April 2005။ 19 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "S'pore to boost expenditure, raise defence spending"၊ AsiaOne၊ 13 October 2011။ 13 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄၄.၀ ၄၄.၁ Barzilai၊ Amnon။ A Deep, Dark, Secret Love Affair။ University of Wisconsin (originally published by Haaretz, July 2004)။ 19 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ British withdrawal from Singapore။ National Library Board (31 December 2007)။ 21 June 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 24 August 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Israel alarm at UN force members"၊ BBC News၊ 18 August 2006။ 12 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Rosenberg, Matt။ Diplomatic and Foreign Relations of Israel။ About.com။ 15 January 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Malaysian FA apologises to Benayoun over racist abuse"၊ BBC News၊ 29 July 2011။ 12 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Jewish Virtual History Tour: Singapore။ Jewish Virtual Library (n.d.)။ 13 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "THE ISRAELI ARSENAL DEPLOYED AGAINST GAZA DURING OPERATION CAST LEAD"၊ Institute of Palestine Studies၊ စာ- 186။ 10 July 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 28 September 2011။
↑ ၅၁.၀ ၅၁.၁ Singapore – Recruitment and Training of Personnel။ Country-data.com (December 1989)။ 19 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ RAAF Base Pearce။ Royal Australian Air Force (2011)။ 12 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Opening Ceremony of the RSAF Helicopter Detachment in Oakey, Australia" (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။ Ministry of Defence။ 20 August 1999။5July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Beyond Limits – Jet Training in France။ Ministry of Defence (2011)။ 25 June 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Equipment – Republic of Singapore Air Force။ GlobalSecurity (2011)။ 12 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Singapore to send 192 military personnel to Iraq"၊ Singapore Window၊7October 2003။ 19 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on6September 2008။
↑ "SAF to provide medical aid, set up dental clinic in Afghanistan"၊ Channel NewsAsia၊ 16 May 2007။ 19 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 8 December 2008။
↑ Katrina Relief Operations။ Ministry of Defence (2011)။ 12 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Savage၊ Victor R.; Yeoh၊ Brenda S.A. (2004)။ Toponymics: A Study of Singapore's Street Names။ Singapore: Eastern Universities Press။ ISBN 978-981-210-364-2။
↑ Bukit Timah Hill။ National Heritage Board။9April 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Towards Environmental Sustainability, State of the Environment 2005 Report။ Ministry of the Environment and Water Resources။ 23 June 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Earthshots: Satellite Images of Environmental Change: Singapore။ Earthshots။ 14 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Speech by MOS Desmond Lee at the Asia for Animals Conference Gala Dinner။ National Development Ministry။ 10 July 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 January 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Singapore, A City inaGarden။ National Parks Board။ 24 March 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Country Rankings။ Yale (25 January 2014)။ 29 January 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2014-01-29 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Weather Statistics။ National Environment Agency။ 10 May 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Bond၊ Sam။ "Singapore enveloped by Sumatran smog"၊ Edie newsroom၊2October 2006။2June 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Mok Ly Yng (22 September 2010)။ Why is Singapore in the "Wrong" Time Zone?။ National University of Singapore။2June 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Timeline: Singapore"၊ BBC News။ 12 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ World War II (2011)။ 12 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Port of Singapore (2011)။ 12 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ GDP (per capita) (1968) by country။ 11 May 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 September 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။, NationMaster.com.
↑ Murphy၊ Craig (2006)။ The United Nations Development Programme: A Better Way?။ Cambridge University Press။ p. 101။ ISBN 978-0-521-86469-5။
↑ Gross Domestic Product (US$)။ World Bank။ 18 September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Gross Domestic Product (S$)။ International Monetary Fund။ 18 September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Gross Domestic Product Per Capita (US$)။ World Bank။ 18 September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Gross Domestic Product Per Capita (S$)။ Department of Statistics, Singapore။7August 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Gross National Income (US$)။ World Bank။ 18 September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Foreign Reserves။ Monetary Authority Of Singapore။ 18 September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Exchange Rates။ Department Of Statistics Singapore။ 27 September 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Real Gross Domestic Product (S$), Gross National Income (S$), GNI Per Capita (S$)။ Department Of Statistics Singapore။ 1 July 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Li၊ Dickson။ "Singapore is most open economy: Report"၊ Asiaone၊ 1 February 2010။ 10 May 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on7February 2010။
↑ "Singapore ranked 7th in the world for innovation"၊5March 2010။ 23 August 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Global Competitiveness Index 2009–2010 rankings and 2008–2009 comparisons။ World Economic Forum (2010)။ 18 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Singapore top paradise for business: World Bank"၊ AsiaOne၊ 26 September 2007။ 22 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on7July 2009။ "For the second year running, Singapore tops the aggregate rankings on the ease of doing business in 2006 to 2007."
↑ "The AAA-rated club: which countries still make the grade?"၊ 15 Oct 2014။
↑ Ogg, Jon C.။ "Remaining countries with AAA credit ratings"၊ NBC News၊ 8 August 2011။ 12 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 22 June 2013။
↑ Singapore Case။ World Bank (2011)။ 12 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ramesh, S.။ "S'pore is India's second-largest foreign investor"၊ Channel NewsAsia၊ 14 January 2011။ 16 October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 22 July 2012။
↑ Seung-yoon Lee။ Ha-Joon Chang: Economics Is A Political Argument။ The Huffington Post။ 18 July 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Official Foreign Reserves Archived 17 January 2013 at the Wayback Machine., Monetary Authority of Singapore.
↑ Statistics Singapore -IMF SDDS – Economic and Financial။ Singstat.gov.sg။9October 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Based on USD/SGD rate of 1.221။ Xe.com။ 14 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Low Siang Kok (22 June 2002)။ "Chapter 6: Singapore Electronic Legal Tender (SELT) – A Proposed Concept"။ The Future of Money (PDF)။ Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development။ p. 147။ ISBN 978-92-64-19672-8။ 28 December 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "The Currency History of Singapore" (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။ Monetary Authority of Singapore။9April 2007။2February 2010 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (အကူအညီ)
↑ Andrew Heathcote (15 April 2013)။ Tax havens: Brett Blundy latest to join the Singapore set။ Business Review Weekly။ Digital Media။ 14 April 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 April 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Financial Secrecy Index - 2013 Results။ Tax Justice Network (7 November 2013)။ 8 November 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Mahtani, Shibani။ "Singapore No. 1 For Millionaires – Again"၊ Wall Street Journal Southeast Asia blog၊ 1 June 2012။
↑ "Minimum wage notasolution"၊ MyPaper၊ 12 January 2011။ 17 October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 20 January 2013။
↑ "Countries with the Biggest Gaps Between Rich and Poor"၊ Yahoo၊ 16 October 2009။
↑ "Global Financial Centres 7" Archived 31 March 2010 at the Wayback Machine., City of London, March 2010.
↑ ၁၀၃.၀ ၁၀၃.၁ Adam, Shamim။ "Singapore Miracle Dimming as Income Gap Widens Squeeze by Rich"၊ Bloomberg၊ 10 August 2011။
↑ Facts and Figures – Singapore Economic Development Board. Archived 20 April 2014 at the Wayback Machine.
↑ Burton, John။ "Singapore economy grows 9.1% in first quarter"၊ Financial Times၊ 10 April 2006။
↑ Facts and Figures။ Singapore Economic Development Board (30 January 2012)။ 18 April 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 April 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Yang Huiwen။ "Singapore ranked No. 1 logistics hub by World Bank"၊7November 2007၊ စာ- 69။
↑ Gross Domestic Product by Industry။ Singapore Statistics (2007)။ 24 June 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Xilinx Underscores Commitment To Asia Pacific Market At Official Opening Of New Regional Headquarters Building In Singapore" (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။ Xilinx။ 14 September 2007။ 29 March 2008 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (အကူအညီ)
↑ "Singapore’s OCBC Strongest Bank as Canadians Dominate"၊ Bloomberg Business၊ May 10, 2011။
↑ "SIA tops Asian list among 50 most admired global firms"၊ The Straits Times၊ Feb 26, 2015။ 18 October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 16 October 2015။
↑ "The world's best airlines"၊ Fortune၊ July 7, 2015။
↑ "Lee Kuan Yew, truly the father of Changi airport"၊ The Business Times၊ September 12, 2015။
↑ Statistics Singapore - Latest Data - Tourism။ Singapore Department of Statistics (2014)။ 29 November 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Dogra၊ Sapna။ "Medical tourism boom takes Singapore by storm"၊ 16 July 2005။ 18 October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 26 October 2005။
↑ Developing Asian education hubs။ EU-Asia Higher Education Platform (2011)။ 23 October 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "The long, long ride"၊ New Straits Times၊7May 2006။ 12 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Foreign Students in Singapore။ Ministry of Education (2011)။9April 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Performance of the Singapore Economy in 2005။ Ministry of Trade and Industry။ 23 August 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Loh, Dominique။ "CPF increase possible if outlook stays good: PM Lee"၊ Channel NewsAsia၊ 31 December 2006။ 18 October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 27 January 2007။
↑ "Employment Situation in Fourth Quarter 2010" (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။ Ministry of Manpower။ 31 January 2011။
↑ Private Education in Singapore။ Ministry of Education (2011)။2July 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ International Student Admissions: General Information on Studying in Singapore။ Ministry of Education။4March 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ASEAN Scholarships: Frequently Asked Questions။ Ministry of Education။6April 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Speech by Tharman Shanmugaratnam, Senior Minister of State for Trade & Industry and Education at the Seminar on "The Significance of Speaking Skills For Language Development", organised by the Tamil Language and Culture Division of Nie On 15 February 2003" (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။ Ministry of Education။2January 2008။ 15 May 2011 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Mandarin is important but remainsasecond language in S'pore MM Lee"၊ Channel NewsAsia၊ 26 June 2010။ 27 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 30 June 2017။
↑ Returning Singaporeans – Mother-Tongue Language Policy။ Ministry of Education။ 8 April 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Refinements to Mother Tongue Language Policy" (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။ Ministry of Education။ 24 February 2011 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၃၀.၀ ၁၃၀.၁ Primary Education။ Ministry of Education (2011)။2July 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Primary School Curriculum။ Ministry of Education (2011)။7April 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2July 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၃၂.၀ ၁၃၂.၁ Secondary Education။ Ministry of Education (2011)။2July 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Special/Express Courses Curriculum။ Ministry of Education (2011)။7April 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2July 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Pre-University Education။ Ministry of Education (2011)။5April 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2July 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၃၅.၀ ၁၃၅.၁ Education and Language။ Singapore Statistics။ 13 November 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 April 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Trends in International Mathematics and Science Study။ IEA။2November 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Comparing countries' and economies' performance။ OECD။ 27 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ QS World University Rankings 2021။ QS။ 2020-08-06 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၄၀.၀ ၁၄၀.၁ Tucci, John (2010)။ The Singapore health system – achieving positive health outcomes with low expenditure။ Towers Watson။ 16 March 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "World Health Organization Assesses the World's Health Systems" (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။ Geneva: World Health Organization။ 21 June 2000။2November 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Statistics Singapore - Latest Data - Births & Deaths။ Singapore Department of Statistics (2014)။ 29 November 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Singapore: Health Profile။ World Health Organization (13 August 2010)။ 16 March 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The World Health Report။ World Health Organization (2000)။ 16 March 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Core Health Indicators Singapore။ World Health Organisation (May 2008)။ 16 March 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Burns, Simon။ "Singapore outlines gigabit broadband plans"၊ V3.co.uk၊ 20 June 2006။6June 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ (အသင်းဝင်ရန် လိုအပ်သည်။)
↑ Statistics Singapore - Latest Data - Social Indicators။ Singapore Department of Statistics (2014)။ 29 November 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Aquino၊ Kristine။ "BMW Costing $260,000 Means Cars Only for Rich in Singapore as Taxes Climb"၊ Bloomberg၊ 17 February 2011။2July 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Once you're here: Basic Road Rules and Regulations။ Expat Singapore (16 August 2009)။ 15 December 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Taxi info။ Land Transport Authority (2015)။5June 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 24 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Public transport ridership။ Land Transport Authority။ 16 February 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2July 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Tracing our steps။ Land Transport Authority။5June 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2July 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Small, Kenneth A.; Verhoef, Erik T. (2007)။ The Economics of Urban Transportation။ London: Routledge။ p. 148။ ISBN 978-0-415-28515-5။ CS1 maint: multiple names: authors list (link)
↑ Cervero၊ Robert (1998)။ The Transit Metropolis။ Washington DC: Island Press။ p. 169။ ISBN 1-55963-591-6။ Chapter 6/The Master Planned Transit Metropolis: Singapore။
↑ Electronic Road Pricing။ Land Transport Authority။ 10 April 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 April 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Singapore remains world's busiest port"၊ China View၊ 12 January 2006။ 22 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Marks၊ Kathy။ "Qantas celebrates 60 years of the 'Kangaroo Route'"၊ 30 November 2007။ 18 October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 16 October 2015။
↑ About Changi Airport။ 21 November 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 2006 Airport of the Year result။ World Airport Awards။ 31 December 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 June 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ivy Ong Bee Luan (2010). "Singapore Water Management Policies and Practices". International Journal of Water Resources Development 26 (1): 65–80. doi:10.1080/07900620903392190. Retrieved on 20 July 2012.
↑ ၁၆၃.၀ ၁၆၃.၁ Census of population (pages 13 to 16 of the pdf file)။ Singapore Department of Statistics (2010)။5July 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2July 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၆၄.၀ ၁၆၄.၁ "Trends in international migrant stock: The 2008 revision", United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2009).
↑ Hoe Yeen Nie။ "Singaporeans of mixed race allowed to 'double barrel' race in IC"၊ Channel NewsAsia၊ 12 January 2010။ 18 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၆၆.၀ ၁၆၆.၁ Statistics Singapore – Latest Data – Households & Housing။ Statistics Singapore (2014)။ 29 November 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ HDB InfoWEB: HDB Wins the 2010 UN-HABITAT Scroll of Honour Award :။ Hdb.gov.sg။ 11 December 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "More than 1.3 million foreigners working in Singapore: Tan Chuan-Jin"၊ Channel NewsAsia၊5August 2014။ 26 October 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 14 September 2014။
↑ Statistics Singapore – Latest Data – Resident Population Profile။ Statistics Singapore (June 2014)။ 29 November 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 October 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The World Factbook။ Central Intelligence Agency။ 24 October 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ng၊ Julia။ "Singapore's birth trend outlook remains dismal"၊ Channel NewsAsia၊7February 2007။ 22 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၇၂.၀ ၁၇၂.၁ ၁၇၂.၂ ၁၇၂.၃ "Census of population 2010: Statistical Release 1 on Demographic Characteristics, Education, Language and Religion" (PDF) (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။ Singapore Statistics။ 12 January 2011။ 24 January 2011 တွင် မူရင်း (PDF) အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 January 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (အကူအညီ)
↑ Global Religious Diversity။ Pew Research (4 April 2014)။ 15 April 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Khun Eng Kuah (2009)။ State, society, and religious engineering: towardareformist Buddhism in Singapore။ Singapore: Institute of Southeast Asian Studies။ ISBN 978-981-230-865-8။ 1 November 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Modernity in south-east Asia။ Informaworld (2 December 1995)။ 1 November 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၇၇.၀ ၁၇၇.၁ ၁၇၇.၂ Census of Population 2010:Key Indicators of the resident Population (2010)။ 8 September 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3September 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၇၈.၀ ၁၇၈.၁ Republic of Singapore Independence Act, s.7။ 20 April 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Education UK Partnership – Country focus။ British Council (October 2010)။2April 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Speech by Mr S. Iswaran, Senior Minister of State, Ministry of Trade and Industry and Ministry of Education။ Ministry of Education (19 April 2010)။ 19 May 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။6January 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Constitution of the Republic of Singapore. Part I (2010)။ 13 July 2002 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2July 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ What do I do if I can't speak English?။ Singapore Subordinate Courts။9July 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Dependant's Pass – Before you apply။ Ministry of Manpower။ 11 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Census of Population။ Singapore Statistics (2010)။ 20 February 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Census of Population 2010။ Singapore Statistics။ 28 February 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ What are some commonly misspelled English words?။ National Library Board (18 April 2008)။3March 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Tan Hwee Hwee။ "A war of words is brewing over Singlish"၊ 22 July 2002။ 18 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on6August 2013။
↑ Oi၊ Mariko။ "Singapore's booming appetite to study Mandarin"၊ BBC News၊5October 2010။ 27 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lee၊ Lee Kuan Yew (2000)။ From Third World to First။ Singapore: Marshall Cavendish။
↑ Afendras၊ Evangelos A.; Kuo၊ Eddie C.Y. (1980)။ Language and society in Singapore။ Singapore University Press။ ISBN 978-9971-69-016-8။ 27 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ammon၊ Ulrich; Dittmar၊ Norbert; Mattheier၊ Klaus J. (2006)။ Sociolinguistics: An international handbook of the science of language and society။ 3။ Berlin: Walter de Gruyter။ ISBN 978-3-11-018418-1။ 27 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Singapore Arms and Flag and National Anthem Act ([[[:တမ်းပလိတ်:Singapore legislation/index]] Cap. 296, 1985 Rev. Ed.])
↑ Literacy and Language။ Singapore Statistics။ 15 March 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Returning Singaporeans – Mother-Tongue Language Policy။ Ministry of Education။ 8 April 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Unemployment။ Ministry of Manpower (2010)။ 22 June 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2July 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Chan, Joanne။ "S'pore unemployment rate falls to three-year low"၊ Channel NewsAsia၊ 15 June 2011။2July 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Assistance။ Ministry of Social and Family Development (26 October 2014)။ 26 October 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "The stingy nanny"၊ The Economist၊ 16 October 2009။
↑ "Welfare in Singapore: Singapore government response"၊ The Economist၊ 17 February 2010။
↑ ActiveSG$100 for Singaporeans to play sport။ 23 June 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NEU PC Plus Programme - Learning - Infocomm Development Authority of Singapore။ 19 January 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 250,000 Public Transport Vouchers to Help Needy Families Cope with Fare Adjustment | Ministry of Transport, Singapore။ 29 May 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Numbers and profile of homeless persons - Ministry of Social and Family Development။ 13 May 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Singapore may cap low-skilled foreign workers"၊ TV New Zealand၊2February 2010။ 11 April 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on4February 2010။
↑ Executive summary။ Building and Construction Authority။ 11 April 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sudderuddin၊ Shuli။ "Singapore's phantom workers"၊ 22 February 2009။ 11 April 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 25 February 2009။
↑ On immigration to Singapore and employment pass for foreign workers။ 3E_Accounting_Private_Limited။ 19 February 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၁၂.၀ ၂၁၂.၁ Speech by Prime Minister Goh Chok Tong on Singapore 21 Debate in Parliament။ singapore21 (5 May 1999)။ 10 February 2001 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ A Short History of Southeast Asia: Singapore။ ASEANfocus, Peter Church (10 July 2009)။ 23 September 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Crown Colony။ U.S. Library of Congress (10 July 2009)။ 27 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "MM Lee says Singapore needs to do more to achieve nationhood"၊ Channel NewsAsia၊5May 2009။ 27 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 30 June 2017။
↑ ၂၁၆.၀ ၂၁၆.၁ ၂၁၆.၂ Findings။ Singapore Statistics (5 May 2010)။ 20 February 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Literacy and language။ Singapore Statistics (5 May 2010)။ 27 November 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Old and new citizens get equal chance, says MM Lee။ PMO (5 May 2010)။ 12 August 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ PM Lee on racial and religious issues (National Day Rally 2009)။ Singapore United (16 August 2009)။ 20 February 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Harding၊ Andrew။ "Singapore slingsalittle caution to the wind"၊ BBC News၊ 16 August 2004။ 27 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Arnold၊ Wayne။ "The Nanny State PlacesaBet"၊ The New York Times၊ 16 August 2004။ 27 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ National Flower။9April 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ National Symbols။ mystory.sg (16 August 2009)။ 27 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။[လင့်ခ်သေ]
↑ "Survey finds that workers in Singapore put in longest hours"၊ China Post၊ 16 August 2009။ 27 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 21 October 2015။
↑ Singapore Dining။ App.www.sg။2May 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2November 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Yue, Karen။ "Business Events Australia to target tummies of Singapore planners"၊ TTGmice၊ 14 May 2013။
↑ ၂၂၇.၀ ၂၂၇.၁ Wu, David Y.H.; Chee Beng Tan (2001)။ Changing Chinese foodways in Asia။ Hong Kong: Chinese University Press။ pp. 161 ff.။ ISBN 978-962-201-914-0။ 27 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Restaurants in Little India, Singapore: A Study of Spatial Organization and Pragmatic Cultural Change" (2001). Journal of Social Issues in Southeast Asia 16: 161–164.
↑ "In durian love"၊ Time Out Singapore၊ 23 August 2008။7May 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Culture and the Arts in Renaissance Singapore။ Ministry of Information, Communications and the Arts။ 24 May 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 May 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Virtual Tourist: Reviews of Esplanade (Theatres by the Bay)။ 30 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 28 March 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Chee၊ Frankie။ "Stand-up is back"၊ 12 July 2009။
↑ Updates။ Royal Academy of Dance (12 September 2009)။ 23 August 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ About us။ The Hantu Bloggers။2July 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။[လင့်ခ်သေ]
↑ About S-League။ Football Association Singapore (2008)။ 1 February 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2July 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "French And Chinese Teams Join Singapore's S-League"၊ goal.com၊ 21 January 2010။
↑ "ASEAN Basketball League takes off"၊ FIBA Asia၊ 20 January 2009။
↑ "Singapore confirms 2008 night race" (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။ Formula One။ 11 May 2007။ 13 June 2007 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 May 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "SingTel to sponsor first Singapore Grand Prix" (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။ Formula1.com။ 16 November 2007။ 10 December 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Collantine၊ Keith (22 September 2012)။ Singapore confirms F1 contract extension to 2017။ Formula 1 Fanatic။ 22 September 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “"The Singapore Grand Prix will remain on the F1 calendar for at least the next five years."”
↑ ၂၄၁.၀ ၂၄၁.၁ Country Report 2010 Edition။ Freedom House (2010)။ 15 December 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7May 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Free-to-Air Television။ MDA (2011)။ 25 November 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ TV listings။ XIN MSN (2011)။9October 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Cable Television။ XIN MSN (2011)။ 14 July 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Internet Protocol Television (IPTV)။ XIN MSN (2011)။ 14 July 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Singapore country profile"၊ BBC News၊ 16 November 2010။ 27 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ World press freedom index 2014။ Reporters Without Borders (2014)။ 14 February 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 July 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Media: Overview။ Ministry of Information, Communications and the Arts (16 March 2005)။ 20 September 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Singapore။ OpenNet Initiative။7May 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Chua Hian Hou။ "MDA bans two video-sharing porn sites"၊ The Straits Times၊ 23 May 2008။ Archived from the original on 24 May 2008။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စင်ကာပူနိုင်ငံ&oldid=705474" မှ ရယူရန်
၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။